Inona avy ireo karazana vavaka ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Inona avy ireo karazana vavaka
Inona avy ireo karazana vavaka. Misy karazana vavaka maromaro ao amin’ny Baiboly. Tsy voatery hitovy foana ny vavaka, satria afaka mivavaka amin’Andriamanitra amin’ny fomba maro isika. Ny mivavaka dia miresaka AZY. Tahaka ny ananantsika resaka maro samihafa amin'ny namantsika, dia afaka manana fehezanteny maro samihafa koa isika arakaraka ny teny manodidina.
Na izany aza, tsy maintsy mitandrina sy aza diso mivavaka. Ny vavaka diso dia izay tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Misy karazana vavaka tsy mety foana:
Sazy misy fitakiana: Tsy afaka mitaky zavatra amin’Andriamanitra isika, mamely antsika, satria tsy misy trosa amintsika Izy. Tsy maintsy mivavaka amim-panetren-tena isika
fehezanteny mifanohitra: vavaka atao ody na fanozonana mba hisian'ny zavatra ratsy.
Vavaka feno lainga: Fantatr’Andriamanitra fa rehefa mandainga isika dia tsy afaka mamitaka azy. Tsy maintsy manao ny marina foana amin’Andriamanitra isika
Asehon’ny Baiboly amintsika anefa ny karazana vavaka isan-karazany azontsika atao. Arakaraka ny ivavahantsika no ahitana karazana vavaka maro kokoa. Ireo ihany ny sasany amin'ireo karazana vavaka ao amin'ny Baiboly:
1 Inona avy ireo karazana vavaka ao amin’ny Baiboly
1.1 1. Vavaka Fiderana sy fankasitrahana
1.2 2. Fanangonan-tsonia
1.3 3. Fieken-keloka
1.4 4. Fanelanelanana
1.5 5. Vavaka iombonana
1.6 6. Vavaka amin'ny fiteny tsy fantatra
1.7 7. Mangataka fanampiana
Inona avy ireo karazana vavaka ao amin’ny Baiboly
1. Vavaka Fiderana sy fankasitrahana
Maro ny antony tokony hiderana sy hisaorana an’Andriamanitra. Tena zava-dehibe izany tsarovy izay rehetra misy sy efa nataon’Andriamanitra ho antsika. Ny fiderana dia fomba iray hanehoana fankasitrahana. Amin’ny alalan’ny vavaka fiderana sy fankasitrahana no ahitantsika fifaliana ao amin’Andriamanitra.
Hidera Anao amin'ny foko rehetra aho, Jehovah ô;
Hotantaraiko ny fahagaganao rehetra.
Hifaly sy ho ravoravo aminao aho;
Hihira ny anaranao aho, ry Avo Indrindra ô!
Salamo 9: 1-2
Miankina amin’Andriamanitra ny zava-drehetra. Noho izany, rehefa mila zavatra isika dia tsy maintsy mangataka amin’Andriamanitra. Afaka manontany isika hoe:
fanohanana: ka Andriamanitra manome izay ilaintsika amin’ny fotoana mety. Na dia ao anatin’ny fotoan-tsarotra indrindra aza, dia manampy antsika hamelona ny tenantsika Andriamanitra.
FAHENDRENA: ho mahatakatra ny tsara sy ny ratsy ary ny fomba fihetsika.
Orientation: mba hahafantarana ny lalana tokony haleha. Afaka mamaly io vavaka io amin’ny fomba maro Andriamanitra.
nofy: mba hahafahany manampy antsika hahatratra izany.
Afaka manao fangatahana maro hafa amin’Andriamanitra isika ankoatra ireo. Fa ambonin'ny zavatra rehetra, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manontany Izay manao Sitrapon’Andriamanitra.
Aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa aoka ho fantatra eo amin'Andriamanitra ny fangatahanareo amin'ny fivavahana sy ny fitalahoana rehetra amin'ny fisaorana.
Tena zava-dehibe izany cmiaiky ny helokao amin’Andriamanitra, mangataka famelan-keloka. Andriamanitra dia mamela heloka mandrakariva izay mibebaka. Ny vavaky ny fiaiken-keloka dia afaka amin’ny vesatry ny fahotana.
Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra.
1 Jaona 1: 9
Mivavaha ho an’ny hafa anisan’ny maha kristiana izany. Ny hafa dia mila ny vavaka ataontsika mba: hamonjy, hanasitrana, hanafaka ny tenany, hamaha olana, hanampy, hanohana, hanana hery ... Andriamanitra dia mihaino ny vavaka ataontsika ary ampio ny olona ivavahantsika.
"Mivavaha mandrakariva ao amin'ny Fanahy amin'ny fivavahana sy ny fangatahana, ary miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra."
5. Vavaka iombonana
Tena mahery tokoa ny vavaka miaraka amin’ny mpino hafa. ny Tian’Andriamanitra ny mahita ny Fiangonany tafaray. Ny vavaka iombonana dia mitranga rehefa miara-mivavaka ny rehetra noho ny toe-javatra mitovy na rehefa mivavaka ny iray dia manaiky ny hafa.
Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano niangonany; ary feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana.
Asan'ny Apôstôly 4:31
6. Vavaka amin'ny fiteny tsy fantatra
Ny vavaka amin’ny fiteny tsy fantatra dia fomba iray ahafahan’ny Fanahy Masina hitarika ny vavaka ataontsika. Tsara izany rehefa tsy mahay mivavaka isika amin'ny toe-javatra iray. Izay manana io fanomezana io dia tokony hampiasa izany.
Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona, ​​fa amin'Andriamanitra; fa tsy misy mahalala Azy, na dia ny Fanahy aza no itenenany zava-miafina.
1 Korintiana 14: 2
7. Mangataka fanampiana
Podemos avelao ny tenantsika amin'Andriamanitra. Rehefa manana olana izahay dia afaka milaza aminao ny fihetseham-ponay ary mangataka fanampiana aminao. Indraindray dia "Ampian'Andriamanitra!" Ny antso vonjy dia ny vavaky ny ory, izay matoky ny fanampian’Andriamanitra.
Jereo aho ary mamindrà fo amiko
Satria irery aho ary malahelo.
Ny fanaintainan'ny foko efa nitombo;
Afaho amin'ny fahoriako aho.
Ankehitriny dia fantatro inona avy no karazana vavaka ao amin'ny baiboly. Araka ny hitanao dia misy fomba samy hafa ivavahana arakaraka ny toe-javatra iainantsika. From Discover.online Manantena izahay fa nanampy anao ity lahatsoratra ity. Raha tianao ho fantatra izao ny fomba hivavahana amin'Andriamanitra araka ny Baiboly, zahao hatrany ny tranokalanay.
Izay no fahotana lehibe 7